समाचार बास बसेर भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर ७, २०७४ ०३:३७:००
डोटी, मंसिर ६ – बझाङको दुर्गम काँडा गाउँपालिकाको वडा नं. ५ न्युनाका ८३ जना मतदाताले बास बसेर मतदान गर्नुपर्ने भएको छ । न्युनाका मतदाता मत हाल्नका लागि धुलीको मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने हुन्छ । धुलीमा रहेको मतदान केन्द्रमा पुग्न न्युनादेखि एक दिन लाग्छ । मतदान केन्द्र टाढा हुँदा स्थानीय चुनावमा पनि न्युनाका धेरै मतदाता उपस्थित भएका थिएनन् ।
काँडा गाउपालिकाको वडा नं. ५ न्युनाका नागरिकले मतदान गर्नका लागि अघिल्लो दिन धेली पुगिसक्नुपर्ने वा मतदान गरकै दिन गए त्यो राति त्यही बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको न्युनाका स्थानीय उमेश बोहराले बताउनुभयो । उहाँले महिला मतदातालाई झन् समस्या हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । चुलोचौको, बस्तुभाउ र बालबालिका छाडेर महिलाहरु त्यति टाढा नजाने भएकाले उनीहरु मत हाल्नबाट बञ्चित भइरहेको स्थानीयबासी ठिम्सी बोहराले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह बनाएपछि साविकका ८ र ९ नम्बर वडाका न्युना र बलौडी गाउँलाई मिलाएर एउटै वडा बनाइएको छ । हालको वडा नम्बर ५ मा रहेको उक्त गाउँ अर्काे गाउँ आउजाउ गर्न ८ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।